Agate dab-damis, noocyo kala duwan oo loo yaqaan 'chalcedony' - gemstone semi-ውድ qaali ah - fiidyow
Ka iibso dukaanka dabka dabiiciga ah dukaankeena
Dhirta dabka, noocyo kala duwan oo loo yaqaan 'gemstone', waa dhagax madow oo qaali ah oo laga helay meelo gaar ah oo ka mid ah meelaha qaarkood ee bartamaha iyo waqooyiga Mexico iyo Maraykanka ee koonfur galbeed (New Mexico, Arizona iyo California). Qiyaas ahaan 24-36 malyan sanno ka hor horaantani waxaa lagu soo rogay dhaqdhaqaaqyo culus inta lagu jiro xilliga qadarinta. Dabkii dabkii ayaa la sameeyay intii lagu jiray muddadan xagjirka ah markii biyaha kulul, oo la isku qurxiyo silica iyo oksida birta ah, oo si joogta ah looga buuxiyey dildilaacyo iyo goobooyin dhagax ku wareegsan.
Daaha dabku wuxuu leeyahay midab qurux badan oo xoqan, oo la mid ah opal, oo leh cabbirka adag ee miisaanka Mohs ee u dhexeeya 5 iyo 7 kaas oo yaraynaya dhacdooyinka xoqidda marka dhagaxyada dabaysha lagu qurxiyo dahabka. Waxyaabaha midabada qaanso-roobeedka ah ee muuqda ayaa laga helaa da 'yarta dabka, oo ay sameeyeen saameynta Schiller ee laga helay muraayad-yar-yar, waxaa keena lakabka kale ee siliinka iyo birta oo ka soo baxa oo u oggolaanaya iftiin si ay u gudubto una sameeyso faragelinta midabada gudaha microstructure dhagxaanta dhagaxa oo keenaya saamaynta dabka ee loo yaqaan magaciisa.
Chalcedony waa foomka cryptocrystalline of silica, ka kooban oo isku xidhan jilicsan ee quartz iyo moganite. Kuwani waa labada macaan ee silica, laakiin waxay ku kala duwanaanayaan quartada waxay leedahay qaab dhismeedka "trigonal crystal", halka moganite uu yahay monoclinic. Qalabka kiimikada qiyaasta kiimikada ee Chalcedony (oo ku saleysan qaabdhismeedka kiimikada ee quartz) waa SiO2 (silicon dioxide).
Chalcedony wuxuu leeyahay qalab wax ku ool ah, waxaana laga yaabaa inuu noqdo semitransparent or translucent. Waxay qaadan kartaa noocyo kala duwan oo midabyo ah, laakiin kuwa badanaa lagu arko waa caddaan cawl, midab-buluug ama hooskii madow oo ka bilaabma cirku oo ku dhowaad madow. Midabka calaacalaha iibiya waxaa badanaa lagu hagaajiyaa dharka ama kuleylka.
Magaca cagaarshowga wuxuu ka yimaadaa chalcedonius latin. Magaca ayaa ka muuqda Pliny da'da dabiiciga ah ee Historia sida ereyga nooc jajab ah ee Jaspis. Magaca waxaa laga yaabaa in laga soo qaado magaalada Chalcedon ee Aasiyada Yar. Ereyga Giriigga ah ee Khalkedon ayaa sidoo kale u muuqda kitaabka Muujintii. Waa hapax legomenon meel kale oo aan helin, sidaa daraadeed way adagtahay in la sheego in maraakiibta qiimaha leh ee ku xusan Kitaabka Quduuska ah uu yahay macdanta la midka ah ee loo yaqaan magacan maanta.
Agate indho jaale
Tags agate, Indhaha jaalaha ah
Xannaanada xariirka leh
Tags agate, Xaragada Crazy
Tags agate, chalcedony, Canab
Dukaan bilaash ah wixii amar ah ugu yaraan US $ 100.00 dukaankeenna